Gịnị mere m kwesịrị iji jiri Google mee ihe?
Weebụ & Chọọ Nchọgharị Nchọpụta
Google na-enye ọtụtụ ngwaọrụ na ọrụ. N'ihe banyere ederede a, search engine nke Google bu ihe ntaneti ugbua kachasi elu nke uwa, nakwa nke kachasi ewu ewu uwa. Google bụ otu n'ime ebe nrụọrụ weebụ kasị ewu ewu n'ụwa. Gịnị kpatara nke ahụ? Gini mere ha ji di oke nma ma gini mere i kwesiri iji ha?
Google & # 39; s Engine Search.
Nchọgharị nke Google bụ ngwaahịa mbụ nke Google ma nọgide na-abụ ngwaahịa kachasị mma nke ụlọ ọrụ. Nnyocha weebụ Google na-enye ihe ndị dị mkpa ozugbo. Google na - eji algorithm nzuzo zoo ihe nchọta nke ọchụchọ ha. PageRank bụ akụkụ nke algorithm a.
Mụtakwuo banyere PageRank
Nchọpụta nyocha nke Google dị ọcha ma bụrụ nke a na-enweghị mgbagwoju anya. A na-egosi mgbasa ozi dị ka mgbasa ozi kama ịghọ aghụghọ na-arụ ọrụ n'ime ya (ha abụghị nkwụnye ụgwọ n'ime nchọta ọchụchọ). Ebe ọ bụ na a na-enye mgbasa ozi dị ka isiokwu dị na gburugburu ya, mgbe mgbe mgbasa ozi bụ njikọ bara uru na nke onwe ha, karịsịa mgbe ị na-achọ ngwaahịa. Ụdị ụdị mgbasa ozi ndị a na-agbaso ogologo oge-ebe ọ bụ na ndị na-asọmpi depụtaghachiri ya.
Mụtakwuo gbasara AdSense
Ntugharị search engine nke Google bu ihe omuma. Ọ bụghị naanị na ị nwere ike ịchọta ibe weebụ dị mkpa, ị nwere ike iji ya ịsụgharị ibe weebụ na na site na asụsụ ndị ọzọ. Ị nwekwara ike ilele anya oyiyi Google ahụ na nchịkwa data search engine, ma ọ bụrụ na ọ dị. Nke a na-eme ka ịchọta akụkụ dị mkpa nke ibe weebụ dị mfe.
N'ime nyocha engines nke Google, enwerekwa ntanetị nke ọchụchọ ntanetị nke nwere ike ịchọta ya iche iche maka nsonaazụ ndị ọzọ, dịka ịchọta akwukwo mmụta, akwụkwọ edemede, vidiyo, ihe akụkọ, map na ihe ndị ọzọ.
Mụtakwuo maka ọchụchọ Google zoro ezo
Ọ na-abụ na Google dị na ọchụchọ. Nke ahụ bụ afọ gara aga. Taa Google nyere Gmail, YouTube, Android, na ọrụ ndị ọzọ. Onyinye amara nke Google (dị n'okpuru nche anwụ nke mkpụrụedemede) gunyere ihe ndị dị ka ọrụ nnyefe mmiri na ụgbọala na-akwọ ụgbọala.
Google Blogger na- ahapụ gị ka ịmepụta onwe gị blog. I nwekwara ike izipu ma nata ozi email sitere na Gmail , ma ọ bụ netwọk mmekọrịta n'etiti Google Plus. Mpido Google na-ahapụ gị ka ịmepụta ma kesaa akwụkwọ, ederede, eserese, na slides, ebe Google Photo na-ahapụ gị ịchekwa na ịkekọrịta foto.
Igwe na-arụ ọrụ na igwefoto na igwe, mbadamba, na smartwatches n'ụwa nile, ebe Chromecast na-enye gị ohere iyi vidio na egwu sitere na ekwentị gị ma ọ bụ laptọọpụ gị na TV ma ọ bụ sitọn. Nest thermostat na-enye gị ohere ịchekwaa ego site n'ịgbanwezi ọnọdụ ụlọ gị ka ọ dabaa àgwà gị.
Gini mere i kwesiri iji zere Google?
Google maara banyere gị. Ọtụtụ ndị na-echegbu onwe ha na Google dị oke ma mara nke ọma banyere gị na àgwà gị.
Nke a bụ otu esi achọpụta ihe Google maara maka gị - ma kpochapụ ya.
Ihe Google ejighi edeba
Google X, Ntọala Google Nzuzo
Ihe ọmụmụ ọmụmụ: Ị Pụrụ Ịchọta Ha Online?
Ntọala saịtị: The Best Online
Brainboost-Azịza Ajụjụ Ajụjụ Search engine
Ahụike - Achọpụta Nchọpụta Ahụike
Kedu ụdị search engine kachasị mma?
Esi kpochapụ ihe omuma Google Search
Gịnị mere Bitstrips?
Gịnị bụ BlackBerry Enterprise Server Do?
Esi Chọta iPad ngwa ọdịnala na ere
Ụlọ Ahịa Ụlọ Ahịa kachasị mma na $ 199.99 ma ọ bụ Ntu
Kerio MailServer 5.7.9 - Server ozi
Ndị Block Ndị Block Site Ịchọta Gị na Chọọ na Facebook
Ihe Ngbawa kachasị oke na akụkọ ihe mere eme nke iPhone
Ọkwọ ụgbọala Scout v1.0 ọkwọ ụgbọala
Otu esi eme ka TV TV Screensavers
Otu esi eme ka ụdaolu efu maka iPhone
Egwuregwu Mgbaaka 8 kacha mma ịzụta na 2018
Egwuregwu maka Ngalaba Ntụrụndụ America
Jiri iTunes iji Detuo CD gị na iPhone ma ọ bụ iPod
Ngwa igwe kachasị mma 8 kachasị mma ịzụta na 2018
Kedu ụdị ụdị DSL dị iche iche?
Otu esi eme ka ozi di na Windows Mail ma ọ bụ Outlook Express
Nyochagharị na Nyochagharị Video: Arc 9
Esemokwu dị n'etiti Adobe PostScript Nzọụkwụ 1, 2 na 3
Ntuziaka nke onye ozu ahia maka PC Motherboards
Usoro Ngwakọta nke HTML Usoro nke Turkish Characters Language